Marooko oo rabta ka mid noqoshada Midawga Afrika - BBC News Somali
Marooko oo rabta ka mid noqoshada Midawga Afrika
Image caption Marooko waxay rabtaa in ay ku soo noqoto Midawga Afrika in kabadan 30 sano oo ay ka maqnaayd kaddib.
Ergay ka socda dalka Marooko ayaa la kulmay madaxwaynaha Kenya, Uhuru Kenyatta si uu uga dalbado in uu dalkiisu ku taageero in uu dib ugu soo noqdo ka mid ahaanshaha Midowga Afrika.
Ergaygan ka socda Boqor Maxamed-ka lixaad oo magaciisa la yiraahdo Dayib Faasi Fihri, ayaa madaxweyne Kenyatta u sheegay in Morooko doonayso in ay dib ugu soo noqoto ururka qaaraddu ku midaysantahay iyadoo aan haatan wax shuruudo ah ku xirayn xubinnimadeeda.
Madaxwayne Kenyatta ayaa isaguna ballan qaaday in uu ol’ole taageero ah u fidin doono morooko.
Dalka Morooko wuxu ka baxay ururka midnimada afrika sannadkii 1984-tii oo waagaa la odhan jiray OAU kaddib markii ururku aqoonsaday xornimada gobolka Saxaraha Galbeed, laakiin haaatan waxay Marooko dib u bilowday ol’ole ay taageero kaga raadinayso shirmadaxeedka ka dhacaya magaalada Kigali ee dalka Rwanda.
Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in wasiirka arrimaha dibaddaa dalka Moroko durba bilaabay booqasho uu ku kala bixinayo dalal dhawr ah oo Afrikaan ah oo ay ka mid yihiin Masar, Libya, Sudaan iyo Itoobiya.